नेपालको पानी अरब पुर्याउछु भन्ने मन्त्रि बिना मगरको मेलम्ची पानी अझै काठमान्डौ किन आएन ? « Postpati – News For All
नेपालको पानी अरब पुर्याउछु भन्ने मन्त्रि बिना मगरको मेलम्ची पानी अझै काठमान्डौ किन आएन ?
फिडिक ठेक्का सम्झौताअनुसार ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्ने वातावरण सचिवले नै तयार पारे। स्वदेश फर्कन लागेको विदेशी ठेकेदारलाई धरपकड गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालमा काम गर्न असुरक्षित भएको सन्देश प्रवाह गरे। सीएमसीको ठेक्का किनारा नलागेकै अवस्थामा आफ्ना सम्पर्कमा रहेका ठेकेदारलाई ‘साइट भिजिट’ गराउने, ठेकेदारको धरौटी जफतलाई नै उपलब्धि ठान्ने तर भुक्तानी किन रोक्नुपर्‍यो भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित नगर्ने।
एकोहोरो ठेकेदारलाई दपेट्ने सचिव र भट्टराईहरूको नियत र नीतिले अनेकौं आशंका जन्माएका छन्। ठेकेदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्‍याएर नेपाल सरकारबाट जरिबाना, ब्याजसमेत गरी अर्बाैं रुपैयाँ असुल्ने खेलमा यिनीहरू लागिपरेका त छैनन् भन्ने आंशका अहिले सर्वत्र छ। किनभने फिडिक ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, भित्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (एसआईएसी) बाट ठेकेदारलाई जिताउने दह्रो आधार र प्रमाण तयार गर्दै गइरहेको छ। ठेकेदारसितै मिलेमतो गरी उसलाई अदालतबाट जिताउँदा अनुचित लाभ प्राप्त हुन्छ। एकातिर ठेकेदारबाट मोटो कमिसन झर्छ। अर्कोतिर नयाँ ठेक्का गराउँदा अग्रिम भुक्तानीबापत कमिसन प्राप्त हुन्छ।
ठाकुर र भट्टराईहरूले नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेछन् भने पनि उनीहरूलाई काम गर्न सहज भने हुने छैन। किनभने उनीहरूले भुक्तानी नपाएसम्म त्यहाँ काम गर्न नदिने उद्घोष भइसकेको छ।
अबको एक मात्र विकल्प भनेको यही ठेकेदारलाई उसको भुक्तानी दिलाएर उसैबाट बाँकी काम गराउनु हो। सीएमसीलाई काम गराउन अहिलेका सचिव, कार्यकारी निर्देशकलगायत व्यवस्थापन पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यिनीहरूको नियत, औकात, क्षमता सबै देखिइसकेको छ। अझै दुर्घटना गराउनु छ भने ठाकुर र कँडेलहरूलाई निरन्तरता दिए हुन्छ। काम चालू गराउन जति ढिलाइ हुन्छ, उसका दाबी रकम बढ्दै जान्छ र उसको हात माथि पर्छ। यसो गर्दा राज्यले ठूलो धनराशि तिर्नुपर्दैन र एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउँछ। होइन, यसलाई भगाएरै छाड्ने, नयाँ ठेकेदार नियुक्त नै गर्ने हो भने माथि उल्लिखित आशंकाहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुनेछन्।
बिकाश थापा/अन्नपुर्ण पोष्ट